रासस ‘राष्ट्रको टिकट’ हो Nepalpatra रासस ‘राष्ट्रको टिकट’ हो
प्रा. पी. खरेल
राससले तयार गरेका समाचारको भोलुम (परिमाण) र भ्यालु (महत्व) का रुपमा हेर्नुपर्छ । राससले आम नेपालीका लागि उत्पादन गरेको परिमाण र महत्व कति छ भन्ने नै हो । तेस्रो, राससले गरेको सेवाको न्यूनतम पहिचान पाएको देखिएन । विभिन्न सञ्चार माध्यममा उपस्थिति कम भयो । जबर्जस्ती प्रयोग गराउने त होइन । रासस भनेको ‘राष्ट्रको हुलाक टिकट’ जस्तै हो । यो अन्य देशमा पनि हुन्छ । यहाँ पनि एउटा मात्र समाचार एजेन्सी हुँदा यसलाई राम्ररी हुर्कन सक्ने वातावरण नेपाल सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले गर्न सक्नुपर्ने हो ।
सरकारले राससमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । सक्षम, व्यावसायिक र निर्भीक नेतृत्व हुनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । राससले धेरै आम्दानी गर्न नसके पनि नेपाल सरकारले पर्याप्त आर्थिक सहयोग दिनैपर्छ, अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन । भारतमा समाचार समिति दुई/तीन वटा चलेका छन् । भारतमा विभिन्न नाममा विभिन्न उद्देश्यले समाचार संस्था खोलिएका छन् ।
उनीहरूले खुफिया कार्यका लागि पनि अन्य समाचार एजेन्सी खोलेका छन् । भारतमा युएनआइ र पिटिआई उहिलेदेखि छन् । उनीहरूलाई सब्सिडी दिइएको छ । काश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म छरिएका हजारौँ सरकारी कार्यालय छन् । ती कार्यालय ती समाचार संस्थाका ग्राहक बन्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहक बन्ने भन्नेबित्तिकै पैसा उहीँबाट लिने हो । पैसा पुगेन भने त्यहीअनुसार रकम बढाइन्छ । यसरी अप्रत्यक्षरुपमा सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ ।
नर्डिक राष्ट्रहरूको व्यवस्था राम्रो भनिन्छ । त्यहाँ पनि समाचार समितिले आर्थिक सहयोग लिइरहेका छन्, ठाडै सहयोग(सब्सिडिज) दिइएको हुन्छ । हामी समग्रमा सहयोग गरिहेका छौँ, सहयोग दिन मिल्छ भनिरहेका हुन्छन् । त्यो सम्पन्न समाजमा पनि समाचार संस्थालाई आर्थिक सहयोग हुँदै आएको छ । यहाँ केको अप्ठ्यारो ? केही पनि अप्ठ्यारो छैन, खुलेर सहयोग गरे हुन्छ, गर्नुपर्छ । सेवाका लागि आम्दानी गर्ने हो । जुनजुन स्थानमा जग्गा छन्, त्यहाँ घर निर्माण गरेर बहालमा दिनुपर्छ तर सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुहुँदैन ।
जति पुग्दैन, त्यो रकम सरकारले दिनुपर्छ । सरकारले चाहेका अवस्थामा जति पनि रकम उपलब्ध गराउन सक्छ । अरु क्षेत्रलाई बेवास्ता नगरिकनै स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन लोभ गर्नुहुन्न । समाचारदातालाई दोब्बर तलब भन्नु पो भएन । समाचार उत्पादनका लागि खर्च गर्नुपर्छ । संस्थालाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार त तयार गर्नुपर्छ नै । त्यसो गर्न नसकिएकाले रासस क्रमिकरुपमा सुक्दैछ । यो दुःखको कुरा हो । यदि त्यसो नगर्ने हो भने रासस ‘डेकोरेटिभ पिस’ मात्र हुन्छ ।
ठूलो कार उद्योग रहेको अमेरिकाको डेट्रोटमा २५ प्रतिशतले कार बिक्री घट्यो भने त्यहाँका राष्ट्रपतिले नै समस्या समाधानका लागि चासो लिन्छन्, सहानुभूति देखाउँछन्, के गर्न सकिन्छ भन्छन् । नेपालमा कृषि सम्बन्धी समाचार कुनकुन सञ्चारमाध्यमले मुख्य समाचार बनाए, त्यो हेरे हुन्छ । कहिले कहिले समाचार दिइयो भने पनि प्रधानमन्त्री वा कृषिमन्त्रीले यसो भने भनेर मात्र समाचार आउँछ ।
नीतिगत कुरा आयो भने ठीकै हो, होइन भने त त्यहाँ कृषकको समस्या के हो, कृषकको उपलब्धि के हो, सफलताका कथा के हुन्, किन असफल भए, यस्ता विषय कति पटक दिइयो त ? त्यही हेरे हुन्छ । यदि हामीले समाजलाई सेवा गर्ने हो भने त्यतातिर पनि हेर्नुपर्छ । बिक्री मात्र गर्ने होइन, सञ्चारमाध्यमको लेक्चर मैले दिने हो भने त्यहाँ कोही पनि आउँदैन नि । वरिष्ठ सिने कलाकारले दिने हो भने धेरै मानिस आउँछन्, त्यो तरिकाबाट भीडलाई तान्नेमा हामी जानुहुन्न । गुणस्तरीय सेवा, सक्षम नेतृत्व र समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ ।
काठमाडौँमा पानी आएन, आएन, मेलम्ची–मेलम्ची भनेर मात्र हुन्छ ? पानी तुलसीपुर, हेटौँडा र वीरगञ्जमा पनि पर्याप्त छ कि छैन, यो पनि सञ्चारमाध्यमले बताइदिनुपर्यो । त्यहाँको समाचार कहिल्यै नआउने त ? के काठमाडौँलाई मात्र नेपाल मान्ने हो ? उत्कृष्ट नगरपालिका कुन हो, राजस्व आम्दानीको हिसाबले कुन हो, दिए हुन्छ । सबै सञ्चार माध्यमका लागि राष्ट्रिय समाचार समितिले नै यस्ता समाचारमा ध्यान पुर्याउन सक्छ ।
काठमाडौँमा बस्नेहरूले पनि राम्रोसँग टेनिसकोर्ट देखेकै छैनन् तर रेडिमेड समाचार सधैँ आउँछ । चार पाँच कोलमका फोटो छापिन्छन् । अमेरिकी दिदीबहिनीमध्ये एकल वा दुवैले जिेतका छन् भनेर समाचार आउने गरेको छ । समाचारको सान्दर्भिकता हेर्नुप¥यो । सर्वोत्कृष्टहरुको दिने हो । समाचारका स्थानहरु खेर गएका छन् । त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले नेपालभित्र हुने खेलकूदका गतिविधि हेर्नुपर्छ । वैकुण्ठ मानन्धरले म्याराथनमा राखेको रेकर्ड तीसौँ वर्षदेखि कायमै छ । हाम्रो जिल्लाजिल्लाका खेलाडीका गतिविधिबारे समाचार दिनुप¥यो ।
सरकारी सञ्चार माध्यमको आवश्यकता
लोकतान्त्रिक सरकार अझ परिमार्जित हुँदै आयो भनिएको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकार त झनै चनाखो हुनुपर्यो नि । त्यसबाट सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । यो विश्वास छ र यस्तो गर्न पनि सकिन्छ । (लेखक राससका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो लेख रासस हीरक वर्षका पूर्वसन्ध्यामा कुराकानीमा आधारित भई प्रकाशन गरिएको हो )
#Prof. P Kharel
#प्रा. पी. खरेल